नेपाल आज | कुन ब्लड ग्रुप भएकाले के खाने ? के नखाने ? जान्नुहोस
बिहिबार, ३० असोज २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
स्वस्थ रहनका लागि नियमित ब्यायामका साथै सन्तुलित भोजनको पनि आवश्यकता पर्दछ। स्वस्थ शरीरका लागि खाना पौष्टिकयुक्त हुनका साथै सन्तुलित पनि हुनु जरुरी छ। के तपाईलाई थाहा छ ब्लड ग्रुप अनुसारको आहार बिहार गर्नाले स्वास्थ्य स्वस्थ हुन्छ भनेर यदि छैन भने आउनुहोस आज हामी ब्लड ग्रुप अनुसार कस्तो खाना खाने भन्ने बारे केहि जानकारी दिन गईरहेका छौं।
ब्लड ग्रुप अनुसार मानिसको प्रकृति र स्वभाव पनि फरक फरक हुन्छ। यस कारण हाम्रो खानपान पनि ब्लड ग्रुपसंग नै सम्बन्धित रहेको हुन्छ। मानिसमा ब्लड ग्रुप ४ प्रकारका हुन्छ। ए ,बि एबी र ओ
कुन ब्लड ग्रुप भएकाले कस्तो खाना खाने ?
ओ ब्लड ग्रुप भएकाका लागि प्रोटिनयुक्त खाना सबैभन्दा प्रभावकारी
ओ ब्लड ग्रुप भएकाहरुका लागि प्रोटिनयुक्त खानाको सेवन गर्नु आवश्यक छ। जसमा दाल , माछा मासु , हरिया सागसब्जी तथा फलफुल आदि।
ए ब्लड ग्रुप भएकाले के खाने ?
ए ब्लड ग्रुप भएकाहरुले खानपानमा बिशेष ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। यस ब्लड ग्रुप भएकाहरुले सागसब्जी , सी फुड जस्ता खानामा बिशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ। तौल घटाउन चाहनेहरुका लागि भने ओलिभ ओयल , सी फुड तथा डेरी प्रोडक्ट्सहरु सबैभन्दा महत्वपुर्ण अप्सन हो।
ए ब्लड ग्रुप हुने मानिसको इम्युनिटी सिस्टम एकदमै संवेदनशील हुने गर्छ। यसकारण उनीहरुले खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। ब्लड ग्रुप ए भएकाहरुले चिल्लो पिरो एवम माछा मासु जस्ता खानेकुराहरु सकेसम्म सावधानी अपनाउनु जरुरी हुन्छ।
ब्लड ग्रुप बि हुने हुन्छन लक्की
बि ब्लड ग्रुप हुनेहरु अन्य ग्रुपका तुलनामा बढी स्वस्थ हुन्छन। हरिया सागसब्जी , माछा मासु , फलफुल जे खाए पनि शरीरमा त्यस्तो कुनै नकारात्मक असर देखिदैन।
यस ब्लड ग्रुप भएकाहरुको पाचन शक्ति पनि मजबुत हुन्छ यसो हो भन्दैमा जस्तो पायो त्यस्तै खाना खानुहोस भन्ने खोजेको चाही होइन आखिर जे होस खानपान चाही स्वास्थ्यवर्धक र सन्तुलित नै हुनु आवश्यक छ।
एबी ब्लड ग्रुप भएकाले खाना सन्तुलित राख्न जरुरी छ। यो ब्लड ग्रुप ज्यादै कम मानिसमा मात्र पाइन्छ। यस ब्लड ग्रुप भएकाहरुले हरिया सब्जी र फलफुल भने प्रसस्त मात्रामा सेवन गर्नु पर्दछ।
एबी ब्लड ग्रुपका लागि अन्डा पनि लाभदायी हुन्छ। त्यस्तै खानामा ननभेज खाने हो भने अझै स्वास्थ्यमा फाइदा पुर्याउने देखिन्छ।